Kenya oo Wafdi u soo dirtey Muqdisho,kadib dagaalkii Xaduudka – Radio Baidoa
Kenya oo Wafdi u soo dirtey Muqdisho,kadib dagaalkii Xaduudka
By Webmaster	 On Mar 8, 2020
Magaalada Muqdisho waxaa soo gaarey Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi,waxaana Muqdisho kusoo dhaweeyey mas’uuliyin ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Wafdiga Wasiirka ayaa waxaa la filayaa inay kulamo la qaataan Mas’uuliyiinta sar sare ee Dowladda Soomaaliya,isaga oo u gudbin doona farriin uu ka wado Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Wararka ay Risaala heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi uu Madaxda dowladda kala hadli doono arrimo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa xaalada iyo xiisada ka taagan xadka labada Dowladood oo uu dhawaan dagaal ka dhacay.
Sidoo kale Arrimo ku saabsan khilaafka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya oo xoogeystay wixii ka dambeeyey doorashadii ka dhacdey magaalada Kismaayo ee lagu doortey Axmed Madoobe taas oo ay waxba kama jiraan ku tilmaamtey Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Jimcihii la soo dhaafay ayaa War kasoo baxay Villa Soomaaliya waxaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya ay qadka talefoonka ku wada hadleen,isa markaana ay isku afgarteen in xiisada caduudka ka taagan xal laga gaaro.
Wafdiga ka socda Dowladda Kenya ee Maanta soo gaarey Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli xisiad dagaal oo u dhaxeeysa Ciidanka Dowladda & kuwa Jubbaland ay weli ka taagan tahay Xaduudka labada dal,waxaana la sheegayaa in Dowladda Kenya ay garab siineyso Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Janan oo Ciidamo ku heysta Magaalada Mandheera.
Wasiir ka tirsan Maamulka Jubbaland oo lagu soo dhaweeyey magaalada Beledweyne